Maxaa Sabab u ah Kororka Kufsiga ka dhaca Puntland? – Radio Daljir
Maxaa Sabab u ah Kororka Kufsiga ka dhaca Puntland?
Maarso 28, 2018 5:27 b 0
Garsoorka Puntland ayaa sheegay sadexdii bilood ee ugu dambeeyey Puntland inay ka dhaceen 18-fal dambiyeed oo kufsi oo lagula kacay haweenka.
Waxaa uu sheegay tacadiyadaasi in lagu dhameeyey qaab wada hadal ah oo aanay helin wax cadaalad ah dhibanayaashii tacadigan loo gaystay, waxaana lagu dhameeyey wadahadal iyo laaluush la siiyay odayaasha gabdhaha tacadiyadan loo gaystay.
Hadaba maxay tahay xalka lagu joojin karro tacadigan, su’aalahaasi iyo kuwa kalle waxaa ka jawaabaya Barkhad Cartan Gurxan oo u dhaqdhaqaaqa arimaha bulshada rayidka, kuna sugan magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari.